New York: Baaq ku Aadan Soomaaliya
Golaha Ammaanka ee Qaramada MIdoobay ayaa ugu baaqay dhinacyada Soomaalida inay xalistaan khilaafkooda.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa shirkii uu ka yeeshay arrimaha Soomaaliya ka soo saaray baaq uu u jeediyay siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaalida.
Goluhu wuxuu sheegay inuu ka xun yahay deganaansho la’aanta muddada dheer ka taagan Soomaaliya, taasoo oo sababtay dhibaatooyin kala gedisan oo ay ka mid yihiin argagixisinimada, falalka burcadbadeedda iyo dhaca hubeysan ee badda ka jira, afduubka iyo xaaladda bani’aadamnimo ee ka sii dareysa.
Wuxuuna ku celiyay mar kale baahida loo qabo in la helo siyaasad dhammeystiran si loo dhiirigeliyo hirgelinta nabad iyo deganaansho ka hana qaada Soomaaliya, iyadoo ay ka wadaqeyb qaadanayaan dhammaan dhinacyada ay quseyso.
Golaha Ammaanku wuxuu ku celiyay in Soomaaliya ay u madaxbannaan tahay sharafta dhulkeeda, madaxbannaanideeda siyaasadeed iyo midnimadeeda.
Goluhu wuxuu dib u xaqiijiyay taageerada ay u hayaan heshiiskii Jabuuti ee salka loogu dhigay xalinta khilaafaadka Soomaaliya. Wuxuu ku nuux nuuxsaday muhiimadda fidinta siyaasadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya, iyo muhiimadda in la helo hay’ado dadka metela oo ku yimaada hannaan siyaasadeed oo loo dhan yahay.
Goluhu wuxuu ammaanay shaqada uu hayo wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Mr. Agustine P. Mahiga, ee ku saabsan horumarinta Nabadda iyo dib u heshiisiinta dalka Soomaaliya.
Golaha Ammaanku wuxuu sheegay in wakhtiga KMG ah uu ku eg yahay bisha August ee sanadkan 2011-ka. Wuxuu ammaanay shaqada uu u hayo sidii Soomaalida uu ugu fududeyn lahaa inay wadatashi isugu yimaadaan, si ay uga heshiiyaan xurgufta siyaasadeed ee dhexdooda ah. Wuxuu kaloo goluhu soo dhoweeyay shirkii wadatashiga ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Nairobi ee u dhaxeeyay dhinacyada Soomaalidu.
Goluhu wuxuu soo dhoweeynayaa shirka Soomaalida dhexdeeda ay kuwada tashaneyso ee ka dhici doona magaalada Muqdisho, kaasoo xoogaa xoojin doona doodihii ka dhashay shirkii wadatashiga ahaa ee ka dhacay Nairobi. Wuxuu ugu baaqay dhammaan dhinacyada Soomaalida inay ka qeyb qaataan shirkaasi ayna ciyaaraan kaalintooda si ay u gaaraan heshiisyo ku soo saabsan wakhtiga kala guurka ee August 2011-ka.
Wuxuu sidoo kale ugu baaqay beesha caalamka, Qaramada Midoobay iyo ururada caalamiga ah inay si buuxda u taageeraan shirkaasi.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay wuxuu sheegay in Soomaalidu ay leedahay mas’uuliyadda koowaad ee nabad ka dhalinta dalkooda. Wuxuu sheegay inuu ka xun yahay xil kororsiga ay hay’adaha dowladdu iskood u sameysteen, wuxuuna ugu baaqay inay ka tanaansulaan xil iskeed u kororsiga.
Wuxuu ugu baaqay dowladda KMG ah inay diiradda saarto, hirgelinta isbedello lagu dihsay shruucda, ayna muujiso masliyad iyo karti, kuna dhiirigeliyay qabashada doorashada madaxweyaha iyo tan guddoomiyaha baarlamaanka.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa wuxuu si xooggan u ammaanay horumarka ay sameeyeen ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee AMISOM iyo ciidamada ammaanka ee dowladda si ay u xoojiyaan ammaanka iyo xasiloonida Muqdisho.
Wuxuuna ku booriyay dowladda KMG ah inay ka faa’ideysato guulahan wax ku oolk ah, iyadoo horumarineysa baahiyaha aasaasiga ah ee ciidanka.
Golaha ammaanka wuxuu ugu baaqay dalalka gobolka ku yaalla inay si buuxda u hirgeliyaan xayiraadda hubka ee ay Qaramada MIdoobay ku soo rogtay dalalka Soomaaliya iyo Eritrea. Wuxuuna cambaareyn u jeediyay weerarada ay ku jiraan kuwa argagixisada ee ka dhanka ah dowladda KMG ah, AMISOM, iyo dadka rayidka ee ay geystaan kooxaha hubeysan ee mucaaradka iyo dagaalyahannada shisheeyaha gaar ahaan kooxda al-Shabaab.
Goluhu wuxuu ugu baaqay dhammaan kooxaha mucaaradka inay hubka dhigaan ayna ka qeybgalaan hannaanka nabadeynta.